युद्धको आगोमा किन जलिरहेको छ सिरिया ? किन मौन छ विश्व ? यस्तो छ नालीबेली – पुरा पढ्नुहोस्……
युद्धको आगोमा किन जलिरहेको छ सिरिया ? किन मौन छ विश्व ? यस्तो छ नालीबेली
दाङ १४ फागुन । सिरियामा राष्ट्रपति बशर अल-असद विरुद्ध सात बर्ष पहिले सुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन पूर्णतया गृहयुद्धमा परिणत भएको छ । यस युद्धमा अहिले सम्म कम्तिमा तिन लाख भन्दा बढीको मृत्यु भैसकेको छ ।
यस गृहयुद्धमा पुरै देश विनाश भैसकेको छ भने विश्वका शक्तिशाली देशहरुपनि सिरियामै एक आपसमा टकराई रहेका छन् ।
कसरी शुरुभयो युद्ध ?
संघर्ष शुरु हुनुभन्दा पहिले सिरिया नागरिकहरु विच भारि बेरोजगार, व्यापक भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतंत्रताको अभाव र राष्ट्रपति बशर अल-असदको दमनको विरुद्धमै थियो ।
बशर अल-असदले सन् २००० मा आफ्नो पिता अफेज अल असदको ठाउँ लिएका हुन । अरब देशहरुमा सत्ताको विरुद्ध भएको आन्दोलनबाट प्रेरित भएर सन् २०११ मार्च महिनामा सिरियाको दक्षिणी शहर दाराआमा पनि लोकतंत्रको समर्थनगर्दै राज्य विरुद्धको सान्तिपूर्ण अन्दोलन सुरु भएको थियो । सरकारले आन्दोलन दबाउन ठुलो शक्ति प्रयोग गरेपछि सिरियाका जनता सबै सडकमा उत्रिन थाले । उनीहरुले राष्ट्रपतिको राजिनामा माग गरिरहेका थिए भने अर्को तर्फ बसर आफ्नो पद जोगाउन राजनीतिक खेलमा व्यस्त देखिन्थे ।
आन्दोलित शक्तिहरुलाई विदेशीहरुले सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै विदेशी शक्तिको भरमा उम्लिएको आतंकवादिहरुलाई निमाश पारेरै छोड्ने भन्दै बशर कडारुपले प्रस्तुत हुन थाले ।
विस्तारै विस्तारै आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गयो र देश गृहयुद्धमा फस्यो । सरकारी सुरक्षाकर्मीसँग लड्न विपक्षीहरुले पनि विद्रोही शक्ति निर्माण गर्न थाले । आन्दोलन गृहयुद्धमा परिणत भैसकेपछि त्यो युद्ध असाद र विद्रोही पक्षको मात्र रहेन ।
सिरियामा जब क्षेत्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु, इरान, रसिया, साउदी अरेबिया र अमेरिकाले सहितले आक्रमण गरे त्यसपछि लाखौको संख्यामा मानिसको ज्यान जान सुरु भयो । बसरको सरकारलाई सैन्य, आर्थिक तथा राजनैतिक सहयोग मिलेपछि सिरियामा युद्धले अर्को भयानक रुप लियो ।
१० प्रतिशत शरणार्थीहरु सुरक्षीत रुपमा युरोप पुगेका थिए ६३ लाख सिरियाली जनता भने बेघर भएका छन् । ८५ प्रतिशत सिरियाली जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।-ridddleनेपाल बाट
Prevट्रयाक्टर दुर्घटनाहुदा तीनको मृत्यु, दुई घाइते…
Nextयुएईमा मोटरसाइकल दुघर्टनामा परि गम्भिर घाइते भएका दुई नेपाली जेल परे, जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने…विस्तारमा हेर्नुहोस
अन्तत: प्रेम सञ्जेल फर्किए आफ्नै श्रम कार्यलयमा, भ्रष्टाचारीलाई कार्यलयमै निषेध गर्दै यसरी जङ्गिय -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
बेलायती राजकुमार ह्यारीले डिर्भोस गरेर बसेकी मेगनलाई भित्र्याए, फराकिलो मनका धनी रहेछन् उनि (भिडियो सहित)